के मेरो सेयरको समस्या अब समाधान भएकै हो त ? – OnlinePahar
के मेरो सेयरको समस्या अब समाधान भएकै हो त ?
२८ माघ २०७७, बुधबार १५:२७ Basanta Khanal	0 Comments	mero share
काठमाडौं : सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले (सीडीएस) ले सञ्चालनमा ल्याएको मेरो सेयर सफ्टवेयरमा पछिल्लो समय देखिएको समस्या आंशिक रुपमा समाधान भएको छ । मेरो सेयर सफ्टवेयरमा विगत एक महिनादेखि खासै समास्या आएको छैन । तर साइट स्लो खुल्ने समस्या भने यथावत् रहेको छ । बेला बेला ह्याङ हुने समस्या पनि जारी छ । तर खुल्दै नखुल्ने मुख्य समस्या भने समाधान भएको दाबी गरिएको छ । यसअघि बारम्बार प्राविधिक समस्या आइरहने मेरो सेयरमा सीडीएसले २०७७ चैत १७ गते दुई वटा सर्भर थपेसँगै समस्या केही हदसम्म समाधान भएको हो । मेरो सेयरमा आउने समस्याको पूर्णरुपमा समाधान गर्नका लागि सफ्टवेयर अपडेटको काम भइरहेको सीडीएसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) पूर्णप्रसाद आचार्यले नेपाली पैसालाई जानकारी दिएका छन् ।साथै, सीडीएसले एक महिना अघि थपेको दुई वटा सर्भरले पनि केही हदसम्म समस्याको समाधान गरेको उनले जानकारी दिए । उनले भने मेरो सेयरमा आउने समस्याको पूर्णरुपमा समाधानका लागि सीडीएसले सफ्टवेयर अपडेट गर्ने काम गरिरहेको छ । अहिले सर्भर थप गरिसकेपछि मेरो सेयरमा ठूलो समस्या भने आएको छैन । सफ्टवेयर अपडेट गर्न भने केही समय लाग्ने उनले बताए ।
सफ्टवेयर अपडेट गरेर आइपीओ आवेदन र इडीआइएसलाई छुट्टै राख्न लागिएको सीइओ आचार्यले बताए । उनले भने मेरो सेयर सफ्टवेयर सिस्टम भित्र नै आइपीओ खुलेको बेलामा इडीआइएस गर्न समस्या नहोस् भनेर सफ्टवेयर अपडेट गर्न लागिएको हो । यसका लागि भेन्डरले काम गरिरहेको छ । पछिल्लो समय प्राथमिक र दोस्रो बजारमा लगानीकर्ताको संख्या उल्लेख्य मात्रामा बढेकाले सिस्टममा समस्या आएको उनको भनाई छ । मेरो सेयरको समस्या समाधानका लागि सीडीएस लागिपरेको पनि उनले जानकारी दिए । सीडीएसको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार ३५ लाख ९ हजार ८८२ वटा डिम्याट अकाउन्ट खोलिएको छ । पछिल्लो समय डिम्याट अकाउन्ट खोल्ने लगानीकर्ताको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । त्यस्तै, आइपीओ भर्ने लगानीकर्ताको संख्या पनि उल्लेख्य मात्रमा बढेको छ ।
पछिल्लो समय आइपीओ खुलेका कम्पनीमा औसत १५ लाख लगानीकर्ताले आवेदन दिने गरेको सीडीएसले जनाएको छ । साथै दोस्रो बजारमा पनि नयाँ लगानीकर्ता भित्रिने क्रम दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।यसले पनि सिस्टममा चप बढेको सीइओ आचार्यको भनाई छ । पछिल्लो समय बढेको चाप अनुसार नै सिस्टम अपग्रेड गरेर यसको समस्या समाधानका लागि सीडीएस लागिपरेको भनाई छ । सीडीएसको मेरो सेयर सफ्टवेयर नचल्दा लगानीकर्ताले बारम्बार हैरानी खेप्दै आएका छन् । धेरै जस्तो आइपीओ खुल्दा मेरो सेयरमा समस्या आउने गरेको थियो । कतिपय लगानीकर्ताले सेयर बिक्रीपछि बेलैमा इडीआइएस गर्न नपाउँदा क्लोज आउटमा परेको घटनाहरु पनि बाहिर आएका थिए । आंशिक रुपमा समस्या समाधान हुँदा पनि लगानीकर्तालाई ठूलै राहत मिलेको छ ।
← १० अर्ब रुपैयाँको एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फण्डले लगानीकर्तालाई कसरी फाइदा दिन्छ ?
बुधबार हाइड्रोपावर कम्पनीहरुमा लगानीकर्ताको आकर्षण,१६ कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार →
उपत्यकामा निषेधाज्ञा लम्बिदै: खाद्यान्न पसल बन्द गरेर कडाइ गर्ने तयारी (कहिले सम्म? हेर्नुहोस्)
२८ माघ २०७७, बुधबार १०:५० Basanta Khanal	0
बिपनाले आँसु झार्दै गुनासो गरिन्, ‘१४ बर्ष मलाई कसैले सम्झिएन’
२८ माघ २०७७, बुधबार १३:२९ Basanta Khanal	0
तीन कम्पनीको शेयर कारोबार सकरात्मक सर्किट लेभमा, कुनको कतिले वृद्धि ?
२८ माघ २०७७, बुधबार १२:२९ Basanta Khanal	0